एक वर्षका लागि तोकियो मासुको मुल्य, हेर्नुहोस् मुल्यसूची - Nepali in Australia
एक वर्षका लागि तोकियो मासुको मुल्य, हेर्नुहोस् मुल्यसूची
October 8, 2021 autherLeaveaComment on एक वर्षका लागि तोकियो मासुको मुल्य, हेर्नुहोस् मुल्यसूची
काठमाडौँ । मासु व्यवसायीहरुले खसी तथा बोकाको मासुको मूल्य निर्धारण गरेका छन् । चाडपर्वको मौका छोपी आफूखुशी मूल्य लिनुभन्दा एकरुपता ल्याउन मूल्य निर्धारण गरिएको व्यवसायीहरुले बताएका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा एक वर्षका लागि तयारी मासुको बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको हो । सरकार र व्यवसायीहरुबीचको आपसी सहमतिमा एक वर्षका लागि विभिन्न प्रकारका मासुको अधिकतम् खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
वाणिज्य विभागसँगको समझदारीमा खसी, कुखुरा, राँगा र बंगुरको मासुको मूल्य गत वर्षकैलाई याथवत राख्ने सहमति भएको राष्ट्रिय मासु व्यवसायी संघले जनाएको छ । सो मूल्य अबको एक वर्षका लागि मान्य हुने संघका अध्यक्ष रमेश खड्गीले बताए । तोकिएको नयाँ मूल्य अनुसार खसीको मासुको मूल्यलाई तीन भागमा छुट्याएर मूल्य तोकिएको छ ।
आन्द्राभुडी राखिएको मासु प्रतिकिलो एक हजार, बोसो राखिएकाको एक हजार २०० र ह्याकुलासहितको ९ सय ग्राहकले रोजेअनुसारको मासुको मूल्य एक हजार ३०० निर्धारण गरिएको हो । यस्तै, कुखुराको मासु प्रतिकिलो ३००,राँगा र बङ्गुरको मासु पाँच/पाँच सय रूपैयाँ तोकिएको छ ।
राष्ट्रिय मासु व्यवसायी संघले फुलपातीका दिनदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर खसी, बोका, कुखुरा र राँगाको मासुको मूल्य निर्धारण गरिएको जनाएको हो । संघका अध्यक्ष रमेश खड्गीले खसी तथा बोकाको तीनथरि मूल्य निर्धारण गरिएको बताए ।
“संघबाट सबै मासु पसललाई निर्धारण गरिएको मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि मूल्य सूची टाँस्न हामीले निर्देशन दिइसकेका छौं । तोकिएको मूल्यअनुसार मासु बिक्री वितरण नभए संघबाट कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।
अन्य समयको तुलनामा दसैंमा कुखुरा र बंगुरको मासुको खपत कम हुने गरेको छ । खड्गीका अनुसार खपत कम हुने मासुको मूल्यमा तलमाथि भएपनि खसी, बोका तथा राँगाको मूल्यमा दसैंको अवधिमा कुनै परिवर्तन हुनेछैन । यही असोज ६ गते वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दसैंका लागि मासुको गुणस्तर, मूल्य र सरसफाइमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको थियो ।
मासु व्यवसायीसँग छलफल गर्दै विभागले गुणस्तरसँगै मूल्यमा एकरुपता ल्याउन आग्रह गरेकाले संघले मूल्य निर्धारण गरेको हो । चीनबाट च्यांग्रा नआउँदा स्वदेशी च्यांग्राको मूल्य यस वर्ष दोब्बर बढ्ने भएको छ । मुस्ताङमा उत्पादन कम र माग उच्च भएको भन्दै व्यवसायीले मूल्य बढाएका हुन् ।
कन्चनपुरमा भारतीय तस्करबाट कु,‘टिए सशस्त्र प्रहरी
September 21, 2021 auther
महासंक’टमा देश: विप्लवले गरे ड’रलाग्दो संकेत, संसद भंगपछि यसरी गर्जिए ! भिडियो हेर्नुहोस् ( संसद भंग सहि कि गलत ? )
पन्ध्र महिनादेखि अष्ट्रेलिया गएकी छोरीको सुन्धाराको होटेलमा लाश फेला परेपछि…